अमेरिकामा २ करोड ८२ लाख ७८ हजारले कोरोना जिते ,४२ प्रतिशत संक्रमित दर न्यून - Enepalese.com
अमेरिकामा २ करोड ८२ लाख ७८ हजारले कोरोना जिते ,४२ प्रतिशत संक्रमित दर न्यून
इनेप्लिज २०७८ जेठ २८ गते ११:१७ मा प्रकाशित
अमेरिकामा एकै दिनमा कोभिड-१९ बाट १३ हजार ४ सय ९ जना संक्रमित भएका छन् । यसै गरी कोरोना भाइरसबाट ३ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
गत बिहिबार जुन १० का दिन २४ घण्टामा उक्त तथ्याँक न्यूयोर्क टाइम्स तथा सिडीसीले निकालेको हो । अमेरिकामा हाल सम्म २ करोड ८२ लाख ७८ हजार ३ सय ९४ जनाले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन् ।
कोरोनाबाट संक्रमण हुनेको औसत दरमा विगत दुई हप्तामा ४२ प्रतिशतले कमी आएको छ । अमेरिकामा हाल सम्म कूल ५ लाख ९८ हजार ७ सय ७० जनाको निधन भएको छ भने दुई हप्तामा २२ प्रतिशतले मृत्यु दर घटेको छ ।
हाल अमेरिकामा २१ हजार २ सय २२ जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्या २३ प्रतिशतले घटेको छ । गत जुन १० का दिन अमेरिकामा ८ लाख ७२ हजार १ सय १९ जनाले कोरोनाको जाँच गराएका छन् ।
अहिले बिहान शुक्रबार सम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कूल संख्या ३ करोड ३४ लाख ३० हजार ३ सय ४२ रहेको छ । अमेरिकामा हाल सम्म ३० करोड ५६ लाख ८७ हजार ६ सय १८ जनाले कम्तिमा एक खुराक खोप लगाएका छन् ।
अमेरिकामा पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या ४२.६ प्रतिशत भएको छ भने एक खुराक खोप मात्र लगाउनेको संख्या ५१.९ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकामा वयस्कहरूले कम्तीमा पनि एक खुराक खोप ६४ प्रतिशत र दुवै खोप अर्थात् पूर्ण खोप ५३. ४ प्रतिशतले लगाई सकेका छन् ।
अमेरिकामा ६५ बर्ष भन्दा माथिका उमेरकालाई कम्तिमा एक खुराक खोप ८६. प्रतिशत र पूर्ण खोप ७५.८ प्रतिशत दिइएको छ ।